“စာဖတ်သူများအားဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » “စာဖတ်သူများအားဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း”
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Jul 22, 2011 in Letter to The Editor, My Dear Diary |9comments
ချမ်းချမ်း ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့ အတွက် ဆောင်ရန်ေ၇ှာင်ရန် ”ပို့ စ် လေး ထဲက ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကျိုးပေးပုံ ကို အဆတွေနဲ့ ထွက်ပြထားတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကွန်မန့် ပေးကြတဲ့ သူတွေထဲက အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟာ အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့အားလုံးကိုဝန်ချတောင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီပိုစ့်ကိုလည်းပြန်ဖျက်လိုက်ပါပြီ။ဘုရားဟော မဟုတ်ပဲ တင်မိရင် ဓမ္မအန္တရာယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ ပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟာ ချမ်းချမ်းစိတ်ကူးနဲ့ ထင်ရာမြင်ရာ ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကို ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ တုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရင် ရလာတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ စာအုပ်ပုံစံကို သိချင်ရင် www.namobook.com ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပထမဦးဆုံး မြင်ရမယ့် စာအုပ်လေးပါပဲ။ ချမ်းချမ်းကိုယ်တိုင် မြန်မာတရားစာအုပ်တွေမှာလဲ မဖတ်ဘူး၊မတွေ့ ဘူးလို့ ဖတ်ရင်းနဲ့ ဆောင်သင့်ေ၇ှာင်သင့်တယ်ထင်လို့ အားလုံးကိုသိစေချင်လို့ ဘာသာပြန်ပြီး တင်လိုက်တာပါ။
ချမ်းချမ်းဖတ်ဖူးတဲ့ အရှင်ဇ၀န ရဲ့ တရားစာအုပ်ထဲမှာတော့..ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကျိုးပေးတဲ့ ဘ၀အကြောင်းက..
တိရိစ္ဆာန် ကို လျှုရင် ဘ၀ ၁၀၀ ချမ်းသာတယ်။လူတွေကိုလှုရင် ဘ၀ပေါင်းများစွာချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ သီလရှိတဲ့သူ.သောတပန် အရိယာ သံဃာတော်နဲ့ ဘုရားကိုလျှုရင်တော့ ဘ၀ပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင် ချမ်းသာတယ်လို့ တော့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ပြီးတော့ ခုဇ္ဇုတ္တ၇ာ ရဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာလဲ သူ့ ထက်သီလရှိတဲ့ ရဟန္တာထေရီမ ကို ခိုင်းမိလို့ ဘ၀ပေါင်း ၅၀၀ တိတိကျွန်ဖြစ်ခဲ့ ရသလို ပစ္စေက ဗုဒ္ဓကို မီးရှို့ သတ်တဲ့ အကုသိုလ်ကလည်း ငရဲကျပြီး ဘ၀တစ်ရာပတ်မီးလောင်သေခဲ့ရပါသတဲ့။ နောက်ဆုံးဘ၀မှာတောင် ဧတဒဂ်ရ သောတပန်ဖြစ်ပေမယ့် မီးလောင်ပြီးမှ သေရရှာပါတယ်။
နောက်ထပ်အကြောင်းအရာက..တော့ ဘုရားရှင်နဲ့ နောက်လိုက် ရဟန္တာ တို့ ကောင်းကင်ခရီး ကြွလာတဲ့အခိုက် မှာ လေထဲမှာ ပျံနေတဲ့ ကျီးတစ်ကောင်ဟာ မီးလောင်နေတဲ့ တဲတစ်တစ်လုံးရဲ့ မီးကွင်းကြီးက လွင့်ပြီး သူ့ လည်မှာလာစွပ်လို့ မီးစွဲလောင်ပြီး သေရရှာပါတယ်။ဒါကို မြတ်စွာဘုရားရှင်က..အဲ့ဒီကျီးကန်းဟာ တစ်ခုသောဘ၀ လယ်သမားတစ်ယောက်ခဲ့ပါသတဲ့.သူဟာ လယ်ထွန်ရင်း သူ့ ခိုင်းနွားက ခိုင်းတာမလုပ်ချင်လို့ စိတ်ဆိုးပြီး ကောက်ရိုးကို ကြိုးကွင်းလိုလုပ်.မီးရှို့ ပြီး သတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့် သူဟာ ဘ၀ပေါင်း များစွာ မီးစွဲလောင်ပြီး သေရပါတယ်။ သူသတ်ခဲ့တာ တစ်ခါပါပဲ ဘာလို့ ဘ၀ပေါင်းများစွာ ခံရပါသလဲ။
နောက်ထပ်အကြောင်းအရာ တစ်ခုက လှေသူကြီးနဲ့ သူကြီးကတော်တို့ခရီးသွားတော့ တစ်ခုသော ကျွန်းမှာ နားပါတယ်။နားပြီးလို့ လှေပြန်ထွက်တဲ့အခါ လှေက လုံးဝမထွက်ပါဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ လှေသူကြီးက တို့ လှေမှာ သူယုတ်မာတော့ ၇ှိနေပြီ။မဲနှိုက်ပြီးရွေးတော့ လှေသူကြီးကတော် မဲကျပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ လှေသူကြီးလဲ ကိုယ့်ဇနီးလူယုတ်မာ မဲကျတော့ သေချအောင်
နောက်ထပ်တစ်ခါ ထပ်နှိုက်ပါတယ်။ လှေသူကြီးကတော်ပဲပြန်ကျတယ်.သုံးခါတိတိ ပြည့်တော့မှ လှေသူကြီးလဲ အများဆန္ဒအ၇..မျက်နှာလိုက်လို့ မ၇တော့ပဲနဲ့ သူကြီးကတော်ကို
ကြိုးတုတ်..အိုးနဲ့ ချည် အိုးထဲ ခဲတွေ သဲတွေ ထည့်ပြီးေ၇ထဲပစ်ချပါတယ်.လှေသူကြီးကတော်လဲ တဖြည်းဖြည်းရေထဲ မြုပ်သွား မှ လှေက ထွက်သွားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားက အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာ တစ်ခုသောဘ၀က သူ့ ကိုသံယောဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင် ဟာ ဘယ်သွားသွားနောက်က အမြဲလိုက်ပါတယ်။မြစ်ဆိပ်မှာ ရေသွားချိုးတော့လည်း ခွေးက အမြဲလိုက်နေတော့ သူငယ်ချင်းတွေက စကြပါတယ်။သူလဲ ရှက်လာတော့ အဲ့ဒီခွေးကိုရေအိုးနဲ့ ကြိုးချည် ရေအိုးထဲကို သဲတွေခဲတွေ ထည့်ပြီး မြစ်ထဲမှာ ရေနှစ်သတ်ပါတယ်.အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့် သူဟာ ဘ၀တိုင်းဘ၀တိုင်း
နောက်ထပ်အကြောင်းအရာက ထိုင်းလူမျိုးပါ.သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်တုန်းက လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာပဲ သူကြိုးဆွဲချပြီး
သူ့ ကိုယ်သူ သတ်သေသွားခဲ့တယ်။အခုဆယ်နှစ်ပြည့်တော့ အဲ့ဒီရုံးက စခန်းမှုးနောက် ကိုအရိပ်လို လိုက်နေတာကို တခြားလူတွေက တွေ့ နေရတယ်။စခန်းမှုးတော့ မတွေ့ ဘူး.စခန်းမှုးထိုင်ရင်လည်း သူက ဘေးနားကကြမ်းပြင်မှာ လည်ပင်းငိုက်စိုက်ချပြီး ထိုင်နေတာကို တခြားသူတွေ တွေ့ 
ပါတယ။်အဲ့ဒါနဲ့ Miracle Channel က ဆရာနဲ Channel 7မှာ လာမေးတဲ့အခါ ဆရာက အခုတီဗီအစီအစဉ်မှာ စခန်းမှုးနောက်က လူတစ်ယောက် ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီးထိုင်နေတာ တွေ့ ပါတယ်။စခန်းမှုး မှတ်မိလား။ သူ့ ကိုသိလားလို့ မေးတော့ စခန်းမှုးက လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်တုန်းက ကြိုးဆွဲချသေသွားတဲ့တရားခံတစ်ယောက် နဲ့ တူတယ်လို့ ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေထဲက လူတစ်ယောက်ကိုသရဲဝင်ပူးတယ်။ ဆရာက ဘာလိုချင်လို့ စခန်းမှုးနောက်လိုက်နေရတာလဲမေးတော့ ၀င်ပူးနေတဲ့ သရဲက သူ့ အမေကိုတွေ့ ချင်တယ်။
တောင်းပန်ချင်တယ် .ခေါ်ပေးပါ။ပြီးရင် သူကြိုးဆွဲချတဲ့နေရာ လေးမှာ သူ့ ကို ကုသိုလ်လုပ်ပြီးအမျှပေးပါ။သာဓုခေါ်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ် ကို ကြိုးဆွဲချသတ်သေတဲ့ဝဋ်က ကျွတ်တော့မှာတဲ့။
ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူဟာ ကြိုးဆွဲချသတ်သေလိုက်တဲ့နေ့ ကစပြီး ဆယ်နှစ်တိတိ နေ့ တိုင်း ကြိုးဆွဲချသတ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်း တစ်နေ့ ကို အ ကြိမ် ငါးရာ ပြည့်အောင် ကိုယ့်ကိုယ် ကို ပြန်လည် သတ်သေခဲ့ရပါတယ်တဲ့။အရမ်းလဲ နာပါတယ်တဲ့။ အမေ့ ကိုလည်းအရမ်းတောင်းပန်ချင်တယ်တဲ့။
အဲ့ဒါ နဲ့ စခန်းမှုးကလဲ ထောင်ထဲက သူကြိုးဆွဲချသတ်သေတဲ့ နေရာ မှာ ဗွီဒီယိုတပ်တာ ဘာအရိပ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့..မဲမဲအရိပ် ကြီး ရယ် ကြိုးကွင်းပုံစံရယ် ခပ်ဝါးဝါးမှုံမှုံလေးတွေ့ ရပါတယ်။နောက်တော့ တရားခံရဲ့ အမေက ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ပြီး ဘုန်းကြီးကိုထောင်ထဲပင့်လာပါတယ်။သူကြိုးဆွဲချသတ်သေခဲ့တဲ့ နေရာေ၇ှ့ မှာ အမျှဝေ ပရိတ်ရေ ရွတ်ဖြန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စခန်းမှုး နောက်က အရိပ်ကိုလဲ မတွေ့ ရတော့ပါဘူး။
မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် သတ်သေရင် အဖန် ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ လို့ တော့ ပြောသံကြားပါတယ်.ဘုရားဟောထားတာတော့ မဖတ်ဖူးသေးပါဘူး။ရှိခဲ့ရင်လည်း ချမ်းချမ်းမဖတ် ရသေးတာဖြစ်မှာပါ.။
ချမ်းချမ်းတင်ခဲ့ဖူးတဲ့ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ”ပိုစ့်လေးထဲက အချက် (၅၀) ဟာ ဘုရားဟောမရှိဘူး.ကုသိုလ်အကုသိုလ် အကျိုးပေးတဲ့ အဆတွေ ထေတာတွေဟာ
ကလေးဆန်တယ်လူပြိန်း ကြိုက်လို့တစ်ချို့ ဝါရင့်တဲ့ သူတွေ နားလည်တဲ့သူတွေက ထင်မြင်ချက်တွေရေးထားတာတွေ့ ရပါတယ်။
အဲ့ဒီပိုစ့်ကို ဘာသာပြန်ပြီး တင်မိတဲ့အတွက် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
၀ါရင့်တဲ့သူတွေ ဝေဖန်တာလဲ မှန်ပါတယ်။
ချမ်းချမ်းဟာ ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ လူပြိန်းပါ။ဒါပေမယ့်..
ဘ၀မှာ ရုန်းကန်လှုပ်၇ှားရင်း ဆရာတော် သံဃာတော်တွေရဲ့ ဆိုဆုံးမမှု လမ်းညွန်မှုကြောင့်သာ ဘာသာရေးအသိတွေ၊ ဘယ်ဟာကကုသိုလ် ဘယ်ဟာက အကုသိုလ် ဆိုတာ သိတာပါ။ဆရာတော်များရဲ့ တရားစာအုပ်တွေဖတ်ရ တရားနာရလို့ ပဲကိုယ့်ကိုယ် ကို ဆင်ခြင်တတ်လာပါတယ်။
အခုလဲ..အဲ့ဒီအကြောင်းအရာ ရေးတဲ့ ထိုင်းဆရာတော်ဟာ ဘုရားဟောမ၇ှိခဲ့ရင်တောင် သူလဲ သူ့ လူမျိုး တွေ နားလည်လွယ်အောင် ငါးပါးသီလ၊ရှစ်ပါးသီလနဲ့ ဝိပဿနာ တရားအားမထုတ်ဖြစ်ရင်တောင် ရောင်းရင်းဝယ်ရင်း အိမ်မှာနေရင်း စိတ်ထားတတ်ဖို့လိမ်မာယဉ်ကျေးပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိအောင် အကုသိုလ်ကိုကြောက်ပြီး
ကုသိုလ် တွေ များများလုပ်ဖြစ်အောင် စေတနာနဲ့ ရေးထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားက ကုသိုလ် အကုသိုလ် အဆတွေ ထေတာတွေ မရှိခဲ့ရင်တောင် အဲ့ဒီဆရာတော်က လူတွေနားနည်လွယ်အောင် ရေးခဲ့တာဖြစ်ချင်ဖြစ် လိမ့်မယ်။
ဥပမာတစ်ခုပေးပါ့မယ်။မြတ်စွာဘုရား၇ှင်ဟာအရှင်ဥပနန္ဒ ကိုအကြောင်းပြုပြီး သံဃာတော်တွေအတွက် ရွှေငွေ အလှုခံမှုကို တားမြစ်ထားပါတယ်။“ရဟန်းတို့ ဆီးနှင်း မြူတိမ် တို့ ဟာ လနေတို့ ရဲ့ အညစ်အကြေးဖြစ်သလို သေရေသေရက် သောက်စားမှု၊မေထုန်မှီဝဲမှု၊ ရွှေငွေအလှုခံမှု တို့ ဟာ တရားကျင့်တဲ့ ရသေ့ရဟန်းများအတွက် အညစ်အကြေးဖြစ်ကြကုန်တယ်” လို့ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် ရဲ့ မြတ်သံဃာ စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ သံဃာတော် တွေတော်တော်များများ ခရီးသွားဖို့လာဖို့ အတွက် ငွေတွေ သုံးနေရတာကကော ဘုရားတားမြစ်ချက် ကိုဆန့် ကျင်ရာရောက်မနေဘူးလား။
ချမ်းချမ်းကိုယ်တိုင်လည်း ဆရာတော်များကို န၀ကံမ အလှု အဖြစ် ငွေတွေလဲလှုခဲ့ဖူးပါတယ်။တချို့ ဆရာတော်များက လုံးဝ မကိုင်ပါဘူး.ကပ္ပိယကိုပဲအပ်ပါတယ်။ကပ္ပိယကနေပြီး လိုအပ်တာကို စီစဉ်ပေးပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သံဃာတော်များအနေနဲ့ တကယ်လိုအပ်လို့ သုံးနေရတာပါ။
ဒီနေရာမှာ ဗဟုသုတလေးရအောင် ပြောပြပါ့မယ်။ ထိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာသာဘုန်းကြီးနဲ့့မြန်မာဘုန်းကြီး မတူတဲ့ အချက်တွေက…ထိုင်းဘုန်းကြီးဟာ မျက်ခုံးမွေး မထားရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့မထားတာလဲ လို့မေးတော့ ဘုန်းကြီး အတု အစစ် ခွဲလို့ ထိအောင်တဲ့။ တစ်ချို့ လူတွေက အချောင် စားချင်လို့သင်္ကန်းစည်းပြီး
နံက် ပိုင်းဆွမ်းလိုက်ခံတယ် ပြီးရင် သင်္ကန်းချွတ် ပြီး လူလိုနေကြတဲ့သူတွေကို ခွဲလို့ ထိအောင်တဲ့။ ထိုင်းနိုင်ငံက ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်းဟာ ဓမ္မာရုံ မီးသဂြိုဟ် စက် တွေ နဲ့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းဆောက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ နံက် အာရုံဆွမ်း မ၇ှိပါဘူး၊နေ့ လည်ဆွမ်း တစ်ထပ်ပဲ ၇ှိပါတယ်။ ချမ်းချမ်းနေတာက မြန်မာဘုန်းကြီး ကျောင်းနဲ့ တော် တော် ဝေးတော့ နီးတဲ့ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ ဝေယာဝစ္စကုသိုလ် ယူရပါတယ်။တရားမထိုင်ခင် ဘုရားကန်တော့တာ သီလပေးတာ ကမဌာန်းနည်းပေးတာလည်း မြန်မာနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချမ်းချမ်းအနေနဲ့လူမျိုးမတူပေမယ့် သာသနာတော့ တူနေတာမို့သူတို့ ဆရာတော်ရဲ့ ဆုံးမလမ်းညွှန်မှုကလည်း ကိုယ့်အတွက် လိုက်နာတာ အကျိုးမယုတ်တဲ့အတွက် စေတနာကိုတော့ လေးစားရမှာပါပဲ။
ဥပမာ..ညညဘက် အမှောင်မှာ အပြင်ထွက်ရင် သရဲခြောက်တယ်လို့ လူကြီးတွေက ပြောထားတော့
သရဲဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ကလေးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ တစ်ကယ်လာခြောက်ပြီအမှတ်နဲ့ အပြင်မထွက်ရဲသလိုပေါ့။အမှန်တော့ သရဲဆိုတာ မမြင်ဘူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သရဲမခြောက်ပေမယ့် အမှောင် ထဲသွားရင် မြွေပါးကင်းပါးတွေ့ နိုင်ပါတယ်.ခလုတ်တိုက်ပြီး ချော်လဲနိုင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
မသွားတာ ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။အခုလဲ အဲ့ဒီထဲမှာ ပါတဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို ရှောင်နိုင်ရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမယုတ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်က စေတနာသည် ကံ တဲ့။ကောင်းတဲ့စေတနာ နဲ့ လုပ်ရင်တော့ ကောင်းတဲ့ကံ မကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ရင်တော့ မကောင်းတဲ့ကံလို့ တော့ ချမ်းချမ်းနားလည်ထားပါတယ်။
ချမ်းချမ်း တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပိုစ့်တိုင်း မှာ..ဘာသာရေး ဆိုရင် မူရင်း ရေးတဲ့ ဆရာတော် နာမည်တွေကိုမှတ်မိသလောက် ထည့်ထားပေးပါတယ်။ပြီးတော့…Credit.. မှာ ..Post…By….ချမ်းချမ်း(ရွာသူလေး) နဲ့ ဘလောဒ့်လိပ်စာလေး ထည့်ထားပေးပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်တွေ့ မြင်တာတွေ၊ ရင်ထဲ၇ှိတာလေးတွေနဲ့ သိတာတွေ ရေးထားရင်တော့.ကိုယ်တိုင်ရေးမို့ လို့ ..Credit မှာ..Written…By…ချမ်းချမ်း(ရွာသူလေး ) နဲ့ ဘလောဒ့်လိပ်စာပါ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ စာရေးတဲ့သူဟာ ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူနိုင်ရပါမယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ မို့ စာဖတ်တဲ့သူတွေထဲမှာ စိတ်ကူးတွေ သိထားတာတွေ လေ့လာထားတာတွေဟာ တူချင်မှလည်း တူပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ပိုစ့်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အမှားပါခဲ့ရင် စာဖတ်တဲ့သူတွေ Complain တက်လာရင်လည်း မူရင်းစာရေးတဲ့သူက ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးရမှာပါပဲ။အခုချမ်းချမ်းတင်လိုက်တဲ့ “ဗုဒ္ဓဘာသာ တို့ ဆောင်ရန်ေ၇ှာင်ရန်” ပိုစ့်လေးဟာ
ကိုယ်ပိုင်ထွင်ပြီးရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖတ်ခဲ့ဖူးတာကို ကြိုက်လို့ပြန်လည်မျှဝေတဲ့ သဘောပါဘဲ။ အခုနားလည်တဲ့သူတစ်ချို့ က အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့အားလုံးကိုယ်စားတောင်းပန်ပါတယ်။ နောက်လဲ အမှားကင်းအောင် သတိထားပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။
အခု အဲ့ဒီပိုစ့် ထဲက အချက် (၅၀) ကိုလည်း သူငယ်ချင်းတွေက တဆင့်ပြန်၇ှယ်မိသွားမှာ စိုးလို့ သီးသန့် မတင်ပဲနဲ့ ပြန်ဖျက်လိုက်ပါပြီ။
ဝေဖန် အကြံပေးချင်တဲ့သူများအတွက် ဒီ ပိုစ့် နဲ့ အတူ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တင်ထားပေးပါတယ်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်”
ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် ဘ၀အတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ကံအကျိုးပေးနည်းတွေကိုတင်ပြပေးပါ့မယ်။ချမ်းချမ်းကိုယ်တိုင် က ကိလေသာ နဲ့ အကုသိုလ်ကင်းနေတဲ့သူတော်စင်မဟုတ်ဘူးနော်။သန်းပေါင်းများစွာထဲက ဘ၀အတွက် ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ လူထဲက လူသေးသေးလေးတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမယ့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ဘ၀ဆင်း၇ဲတဲ့ ကြားထဲက စိတ်ချမ်းသာအောင် အကုသိုလ်ကင်းအောင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်က အမှားတွေကိုသင်ခန်းစာယူတယ်။ဆရာတော်ဘုရားများရဲ့ သြ၀ါဒနဲ့ 
(၁) ၀ိပဿနာ တရားကြိုးစားအားထုတ်ရင်…………………………………………………………………………ကုသိုလ်—-မရေမတွက်နိုင်
(၂) မိဘကို သေဆုံးအထိ ရိုရိုသေသေလုပ်ကျွေးပြုစုလျှင်……………………………………………………………ကုသိုလ်—-၁ သိန်း ဆ
(၃)တစ်ခုလပ် မုဆိုးမ ဟာ နောက်အိမ်ထောင်မပြုပဲ ထားခဲ့ဖူးတဲ့ သစ္စာကို စောင့်ထိန်းလျှင်………………………..ကုသိုလ်—-၁၀၀၀၀ ဆ
(၄)ဇနီးမောင်နှံ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရိုရိုသေသေနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်ကြလျှင်………………………………………ကုသိုလ်—- ၁၀၀၀ ဆ
(၅) သက်သက်လွတ်စားရင် …………………………………………………………………………………………..ကုသိုလ်—-၁၀၀ ဆ
(၆)ညီအစ်ကိုမောင်နှမအချင်းချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကူညီစောင့်ရှောက်လျှင်……………………………………….ကုသိုလ်—- ၁၀၀ ဆ
(၇)ကိလေသာ ရာဂတဏှာစိတ် ၁ခါ ထိန်းနိုင်လျှင်……………………………………………………………………ကုသိုလ်—-၁၀ ဆ
(၈)သတိသံဝေဂ တရားရမယ့် ဆင်ခြင်စရာ သင်ခန်းစာယူစရာ ဇာတ်လမ်း ရိုက်လျှင် စာရေးလျှင်…………………ကုသိုလ်—- ၁၀ ဆ
(၉) လာဘ်မစားပဲ တာဝန်ကျေပွန်စွာအလုပ်လုပ်လျှင်…………………………………………………………………ကုသိုလ်—- ၈ ဆ
(၁၀)အကောက်ခွန်ရေခ မီးခ အပြည့်ပေးလျှင်………………………………………………………………………….ကုသုလ် ၅ ဆ
(၁၁) မိဘကိုအလုပ်ကို ၁ခါ ကူညီရင်………………………………………………………………………………………….ကုသိုလ်—-၄ ဆ
(၁၂) ငယ်ရွယ်သူက ကြီးသူကို ကူညီလျှင်………………………………………………………………………………..ကုသိုလ်—-၃ ဆ
(၁၃)အိမ်၇ှင်မက အိမ်အလုပ်တာဝန်ကျေပြီးသန့် ရှင်းအောင် ၁ ရက် လုပ်လျှင်…………………………………………ကုသိုလ်—–၃ဆ
(၁၄)တရားစာအုပ် ၁ အုပ် လျှုဒါန်းရင်…………………………………………………………………………………….ကုသိုလ်—-၃ ဆ
(၁၅)ကိုယ့်ကို အထင်သေးအပြစ်ပြောတာကိုစိတ်မဆိုးလျှင်………………………………………………………………..ကုသိုလ်—- ၁ ဆ
(၁၆)ကိုယ့်ထက် ဆင်း၇ဲနွမ်းပါးတဲ့ သူကို ငွေ ၅၀ ကျပ်လျှု…………………………………………………………………ကုသိုလ်—- ၀.၇ ဆ
(၁၇)ယဉ်ကျေးချိုသာပြီး ချစ်စရာစကား ၁ ခါ ပြောလျှင်…………………………………………………………………..ကုသိုလ်—-၀.၅ ဆ
(၁၈)သစ္စာရှိပြီး .ကတိ ၁ ခါ တည်လျှင်……………………………………………………………………………………..ကုသိုလ်—-၁ ဆ
(၁၉)ငှက်လေး ငါးလေးတွေ ကို ၁ ခါ လွှတ်ရင်………………………………………………………………………………ကုသိုလ်—-၁ ဆ
(၂၀)ဆရာစကားနားထောင်ပြီး ၁ ခါ ကြိုးစားလျှင်……………………………………………………………………………ကုသိုလ်—- ၁ ဆ
(၂၁)ဆရာကို ၁ခါ ရှိခိုးရိုသေလျှင်…………………………………………………………………………………………….ကုသိုလ်—-၁ဆ
(၂၂)ဈေးနှုန်းမှန်ပြီး အမြတ်မတင်ပဲ ပစ္စည်း ၁ ခါ ရောင်းလျှင်……………………………………………………………….ကုသိုလ်—– ၀.၃ ဆ
(၂၃)ဆေးဝါး ၁ ခါ လျှုဒါန်းလျှင်………………………………………………………………………………………………..ကုသိုလ်—- ၁ ဆ
(၂၄)လူသွားလမ်း မှာ တံမျက်စည်း တစ်ခါလှည်းလျှင်……………………………………………………………………….ကုသိုလ်—–၀.၄ ဆ
(၁)ကိလေသာ ရာဂ တရား ထကြွစေသော ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်နှင့် စာပေ ၁ခါ ရေးသားလျှင်………………………………..အကုသိုလ်—-၃၀၀၀ ဆ
(၂) ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် သတ်သေလျှင်…………………………………………………………………………………………အကုသိုလ်—-၁၀၀၀ ဆ
(၃) ကိုယ်ဝန် ၁ ခါ ဖျက်ချ ခဲ့လျှင်………………………………………………………………………………………………အကုသိုလ်—-၁၀၀၀ ဆ
(၄) သူတစ်ပါး ဇနီးမယားနှင့် ခင်ပွန်းအား မြှုဆွယ်ဖြားယောင်းပြီး ၁ ယောက် ပေါင်းသင်းလျှင်…………………………….အကုသိုလ်—–၁၀၀၀ ဆ
(၅) ဘုရား ကျောင်းကန်ဇရပ်ပေါ်တွင် အညစ်အကြေးနဲ့ အမှိုက် ၁ခါ စွန့် ပစ်လျှင်………………………………………….အကုသိုလ်—-၁၀၀ ဆ
(၆) အစ္စလာမ်၊ခရစ်ယာန်နှင့် အခြားသောဘာသာ သာသနာအား ဆဲဆိုပုတ်ခတ်စော်ကား မှု ၁ ခါ ပြုလျှင်……………….အကုသိုလ်—–၁၀၀ ဆ
(၇) ဘာသာသာသနာ ညှိုးနွမ်းစေသော အကြောင်းအရာအား ရုပ်ရှင်၊ပြဇာတ် ၁ ခါ ရိုက်လျှင်……………………………….အကုသိုလ်—-၁၀၀ ဆ
(၈) ပြည့်တန်ဆာ မိန်းမနှင့် ၁ ခါ ပျော်ပါးလျှင်………………………………………………………………………………….အကုသိုလ်—-၁၀၀ ဆ
(၉) မောင်နှမ အချင်ချင်း စောင်းမြောင်းပြောဆိုပြီး ၇န် ၁ ခါဖြစ်လျှင်………………………………………………………….အကုသိုလ်—၁၀၀ ဆ
(၉) ညစ်ပတ်၊ယုတ်ညံ့ သော စကားတစ်ခွန်းပြောဆိုလျှင်………………………………………………………………………အကုသိုလ်—-၁၀ ဆ
(၁၀) မိဘ ဆုံးမစကားနားမထောင်ပဲ တစ်ခါ ဆန့် ကျင်လျှင်……………………………………………………………………အကုသိုလ်—-၁၀ ဆ
(၁၁) ဆွံ့ ၊ အ၊ မျက်မမြင်၊ စကားထစ်၊ ရုပ်ဆိုးသောသူများအား လိုက်တုပြီး ၁ ခွန်း ကဲ့ရဲ့ လှောင်ပြောင်ပြောဆိုလျှင်…………အကုသုလ်—–၅ ဆ
(၁၂) ပစ္စည်းအတု၊ဆေးအတု၊ သက်တမ်းကုန်နေသော ဆေးနှင့်၊ပစ္စည်း ၁ ခါ ရောင်းချလျှင်………………………………….အကုသိုလ်—-၅ ဆ
(၁၃) ကြက်တိုက်ဖဲရိုက် မကောင်းမှု လောင်းကစား ၁ ခါ ပြုလျှင်………………………………………………………………အကုသိုလ်——၅ ဆ
(၁၄) လူဆိုး ၊လူမိုက် အား ကူညီအားပေးအားမြှောက် ၁ ခါ ပြုလျှင်………………………………………………………………အကုသိလ်ု—၄ ဆ
(၁၅) စိတ်ဆိုး၊ဒေါသ ထွက်ခြင်း ၁ ခါ မပြေပျောက်လျှင်………………………………………………………………………….အကုသိုလ်….၃ ဆ
(၁၆)လင် မယား ရန်ဖြစ်ဆဲဆို ရိုက်နှက်ခြင်း ၁ခါ ပြုလျှင်………………………………………………………………………..အကုသိုလ်—–၂ ဆ
(၁၆)သူတစ်ပါးအတင်းပြောဆိုခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်း၊ ၁ ခွန်း ပြောလျှင်………………………………………………………………အကုသိုလ်—၁ ဆ
(၁၇)ကောက်ရ ပစ္စည်းအား ပိုင်ရှင်ကိုသိပါရက်နှင့်မပေးပဲ ၅၀ ဖိုးယူထားမိလျှင်……………………………………………….အကုသိုလ်—၁ ဆ
(၁၈) ဈေးပေါပေါနှင့်ရသော ခိုးရာပါပစ္စည်းအား ၅၀ ဖိုးလက်ခံသိမ်းယူထားလျှင်………………………………………………အကုသိုလ်—-၁ ဆ
(၁၉)မီတာခ၊ရေခ နှင့်အိမ်အမြတ်ခွန်အား ၅၀ ဖိုးမပေးလျှင်…………………………………………………………………….အကုသိုလ်—–၀.၆ ဆ
(၂၀)ဆရာသမားကို စကားတစ်ခွန်း ခံပြောမိလျှင်……………………………………………………………………………….အကုသိုလ်—-၁ ဆ
(၂၁)ငှက် ကလေးနှင့် တောတိရိစ္ဆာန်အား တစ်ကောင်ပစ်လျှင်………………………………………………………………..အကုသိုလ်—–၀.၅ ဆ
(၂၂)ငါး၊ ပုဇွန် တို့ အား စားသောက်ရန် ၁၀ ကောင်သတ်လျှင်………………………………………………………………….အကုသိုလ်—–၁ ဆ
(၂၃)သစ္စာမဲ့၊ကတိမတည် ပဲလိမ်ညာပြောဆိုခြင်း ၁ ခါ ပြုလျှင်…………………………………………………………………..အကုသိုလ်—–၁ ဆ
(၂၄)မိဘအား စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် တစ်ခါပြုလျှင်………………………………………………………………………………အကုသိုလ်—–၁ ဆ
(၂၅)လမ်းပေါ်၊လူအများအပန်းဖြေရာနေရာ တို့ တွင် အမှိုက် ၊စားကြွင်းစားကျန် ၁ ခါ ပစ်ချလျှင်………………………………အကုသိုလ်—-၁ ဆ
(၂၆)ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မိဘကို တစ်ရက် မပြုစုလျှင်………………………………………………………………………အကုသိုလ်…၁ ဆ
ရေထဲကို ခဲလုံးပြစ်ချလိုက်တယ် ဆိုပါစို့အဲ့ဒီခဲလုံးကို ကျန်တဲ့သူတွေက လက်အုပ်ချီဆုတောင်းပြီး ရေပေါ်ပြန်ပေါ်လာပါစေလို့ ဘယ်လောက်ပဲ ဆုတောင်း ဆုတောင်း ခဲလုံးက ပြန်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။
ရေထဲကို ထောပတ်ဆီ ပစ်ချလိုက်တယ် ဆိုပါစို့ကျန်တဲ့ လူတွေက လက်အုပ်ချီဆုတောင်းပြီး ရေအောက်မြုပ် ပါစေ မပေါ်လာပါစေနဲ့လို့ ဘယ်လောက်ပဲဆုတောင်းဆုတောင်း
Arr Larr Larr, very very long article
please don’t make, that much long, please.
ဒီမှာကတော့ ကိုယ့်အမြင်ကို အမှန်ဆိုပြီးရေးနေကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။ ကိုယ်တင်ပြတဲ့ သဘောထားကို ကြိုက်ရင်ယူကြဖို့ မကြိုက်ရင်လည်း ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ယူကြတာပဲ။ ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူလို့ ချမ်းချမ်းလို တောင်းပန်တဲ့သူတော့မရှိဘူး။ အမြင်မတူရင်တော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်း ဆော်ပလော်တီး ကြတာပဲ။
အမှားသိလို. တောင်းပန်တာလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါး ဖြစ်တာမို. ခွင်.လွှတ်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်လည်း အစ်မလို တစ်ခါက တောင်းပန်ဖူးပါတယ် ဒီရွာထဲမှာ
ပထမ ကွန်မန်းက ဘာတွေ ပေးလဲတော့ မဖတ်လိုက်ရဘူး။
ဝင်ချပြီးမှတော့ တောင်းပန်မနေပါနဲ့တော့ ချမ်းချမ်းရယ်။ ချလက်စနဲ့ ဆက်သာချသွားပါတော့…
သဂျီးက တောင်းပန်ဖို့ အတွက် Category အသစ်ထပ်ခွဲပေးမယ်ကြောတယ်
အဲကျရင် ဘူ့ ကို အရင်တောင်းပန် ရမလဲ စဉ်းစားနေတာ
ကောင်းပါတယ်။ အဆတွေမှန်တာမမှန်တာထက် အကုသိုလ်ကိုကြောက်တတ်ပြီး မကောင်းတာကိုရှောင် ကောင်းတာကိုဆောင်တတ်ဖို့ ပိုပြီးထိမ်းသိမ်းရမှာပေါ့နော။
အတိုင်းအဆကိုမသိလည်း အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်၊ တတ်နိုင်သမျှနည်းအောင်နေနိုင်ဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်
ဒီမနက်က MRTV4မှာလွှင့်တဲ့ တရားကို နားထောင်မိလို့ပါ
အဲဒါက သောတာပန်တွေဟာ ကံ၅ပါးလုံသွားပြီဆိုတော့ အိပ်မက်ထဲမှာရော ကံကျူးလွန်သေးလားဆိုတာပါပဲ
သောတာပန်တွေရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုက ဖြူစင်သွားတဲ့အတွက် အိပ်မက်ထဲမှာတောင် ကံ၅ပါးလုံသွားပြီ